Madaxeynihii dalka Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi oo is casilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Madaxeynihii dalka Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi oo is casilay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxeynihii dalka Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi oo is casilay
By A warsame on 23rd January 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Yemen, Abdrabbuh Mansour Hadi iyo xukuumadiisa ayaa is casilay kadid markii Kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiintu la wareegeen xarrumaha dowladda ee magaalada caasimadda ee Sanca.
Madaxweynaha ayaa Iscasilaadiisa ku macneeyey in Kooxda Xuuthiyiintu fashilyeen heshiis labada dhinac dhexmaray oo ay ka mid aheyd iney go’doominta ka qaadaan hoyga madaxweynaha, kadib markii ay kala wareegeen madaxtooyada.
Mr Hadi ayaa gurigiisa ku go’doonsanaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kaddib markii ay isku gadaameen dagaalyahanno Xuutiyiin ah.
Waxa uu sheegay in aanu xukunka sii wadi karin, maadaama Xuutiyiinta ay ka baxeen heshiis ahaa in ay go’doominta ka qaadaan aqalka madaxweynaha.
Abdrabbuh Mansour Hadi ayaa sidoo kale sheegay inuu isku dayey in dhibaatada taagaan lagu xalliyo si nabad ah, hase ahaatee arrintu gaartay ismariwaa, sidaas dartdeed uu ka cudurdaaranayo inuu xilka madaxweynaha sii hayo.
Golaha Wakiilada dalka Yemen ayaa diiday is casiladda madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi, wuxuuuna golahaasi yeelan doonaa shir degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda soo korortay.
Iscasilaadiisa ayaa noqon karta wadada keliya ee furneyd madaxweynaha. Jabhadda Xuuthiga ayaa si shaac baxsan u soo dhaweysay iscasilaadaasi, balse ma ahan wax ay doonayeen.
Xilli dambe oo arbacadii ah ayaa madaxweynaha iscasilay ee Yemen, Abdrabbuh Mansour Hadi wuxuu sheegay inuu heshiis la gaaray Jabahadda Xuuthiyiinta ee la magac baxay “Ansaarullah”.
Xukun weliba oo ay Xuutiyiinta sameeyaan, ayaan laga aqbali doonin Koonfurta dalka, oo ah halka ay ku nool yihiin Suniyiinta leh aqlabiyada dalkaasi.
Waxaa sidoo kale jirta cabsi ah in garabka Al-Qaacida ee dalkaasi ka howlagala, uu ka faa’iideysto jahawareerkan siyaasadeed.